कोरोनाको तेस्रो लहर चाडैं आउँछ, सामना गर्न तयार रहौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय – Health Post Nepal
कोरोनाको तेस्रो लहर चाडैं आउँछ, सामना गर्न तयार रहौँ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८ असार २४ गते ११:५४
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
नेपालमा पनि कोरोनाको तेस्रो लहर आउने आउन सक्ने भन्दै सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए।
‘केही दिनयता संक्रमणदर बढ्दै गएको छ। खुकुलो निषेधाज्ञा नागरिकहरू जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएका छैनन्,’ डा. पौडेलले भने, ‘केही दिनको संक्रमणदरलाई हेर्दा अर्को लहर आउन संकेत गरेको छ।’
तेस्रो लहरको संक्रमणको जोखिम कम गर्न नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अनिवार्य पालना गर्न डा. पौडेल अनुरोध गर्दछन्।
एक हप्ता अगाडी २० प्रतिशत भन्दा कममा संक्रमणदर झरेको थियो।
तर पछिल्लो तीन दिनयता कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । असार २१ गते २,६२२ कोरोना संक्रमित थपिँदा त्यसको भोलिपल्ट २२ गते २,६३४ मा संक्रमण पुष्टि भयो । बुधबार नयाँ संक्रमितको संख्या २,९७९ पुगेको छ । जुन संक्रमणदर २६ प्रतिशत माथि हाे।
‘कोरोनाको परीक्षण न्युन भएको छ। लक्षण भएर पनि मानिसहरू घरमै बसिरहनु भएको छ। जसले गर्दा संक्रमण फैलिने सक्छ। सरकारले लक्षण भएका सबै नागरिकलाई निशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। संक्रमण फैलावट रोक्न अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नुहोस्,’ डा. पौडेलले भने।’
पौडेलले पछिल्लो समय देखिएको कोरोनाभाइरस हावाबाट पनि सर्न सक्ने भएकाले कार्यास्थलहरुमा सकेसम्म खुला ठाउँमा रहन तथा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।
धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरु खुलेकका कारण पनि संक्रमण बढेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।
‘संक्रमणको जोखिम कायमै छ । सार्वजनिक सवारीका साधन गुडे पनि, सरकारी कार्यालय लगायत अन्य सेवा सञ्चालनमा आएपनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न नभुलौं’ डा. पौडेलले भने ।
नेपालमा अहिले कोभिड–१९ का डेल्टा ए वाई १ र कप्पा भेरियन्ट सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गएको वैशाख २६ देखि जेठ २० गतेसम्मको नमुना परीक्षणमा मुख्य रुपमा डेल्टाको म्युटेन्ट रुप एवाई १ र कप्पा भाइरस सक्रिय रहेको पाइएको छ।
कोभिडको दोस्रो लहरमा डेल्टा र एवाई १ भेरियन्ट सक्रिय देखिएकोमा पछिल्लो समय कप्पा थपिएको हो ।